9. 10. 2019 La Liga and Serie A News - Myanmar Football Arena
9. 10. 2019 La Liga and Serie A News
ဘာစီလိုနာကွယျပှငျ့လီယှနျနယျမကျဆီကတော့ ပီအကျဈဂြီအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ အသငျးဖျောဟောငျး နမောတယောကျ ရီးယဲလျမကျဒရဈအသငျးဆီ ပွောငျးရှသှေ့ားမှာကို စိုးရိမျနပေါတယျ။
စီးရီးအလေကျရှိခနျြပီယံ ဂြူဗငျတပျအသငျးဟာ ဒီနှဈရာသီမှာ ခွစှေမျးကောငျးတှပွေသနတေဲ့ တိုကျစဈကစားသမား ကှာဒရာဒိုကို စာခြုပျသဈခြုပျဆိုကာ အသငျးမှာပဲ ဆကျလကျထိနျးသိမျးသှားဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။
နာပိုလီအသငျးဟာ ဘာစီလိုနာအပါအဝငျ ဉရောပထိပျသီးကလပျအသငျးအမြားစု ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနတေဲ့ နျောဝတေိုကျစဈမှူးလေး ဟာလနျးကို အရချေါယူနိုငျဖို့ ကွိုးပမျးလာပါတယျ။ ဟာလနျးဟာ ဒီနှဈရာသီမှာ ရကျဘူးလျဆယျဘာ့ဂျြအသငျးအတှကျ (၁၁)ပှဲ ကစားပေးပွီးခြိနျမှာ သှငျးဂိုး (၁၈)ဂိုးအထိ သှငျးယူပေးထားနိုငျသူပါ။
လူငယျကွယျပှငျ့လေး ဘရာဟငျဒီယကျဇျကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့နှအေပွောငျးအရှမှေ့ာ ရီးယဲလျမကျဒရဈအသငျးက အငှားခမြယျ့အစီအစဉျကို ငွငျးပယျခဲ့ပွီး ဘာနဗွေူးမှာသာ ဆကျရှိဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ကာ ပုံမှနျနရောအတှကျ အခှငျ့အရေး စောငျ့ဆိုငျးနတောဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
မကျဆီက သူ့အနနေဲ့ အခှနျကိစ်စတှကွေောငျ့ လှနျခဲ့တဲ့ (၅)နှဈခနျ့ (၂၀၁၄)ခုနှဈလောကျက ဘာစီလိုနာအသငျးကနေ ထှကျခှာဖို့ နီးစပျခဲ့တယျလို့ ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဘလှနျဒီအောဆု (၅)ကွိမျရ ကစားသမားဟာ နောကျဆုံးမှာတော့ နူးကမျ့မှာပဲ ဆကျကစားဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျအသငျးဟာ လာမယျ့ဇနျနဝါရီလမှာလညျး တိုကျစဈကစားသမား ဒီဘားလားကို ရောငျးထုတျသှားဖို့ မရှိဘဲ တူရငျမွမှောပဲ ဆကျလကျထိနျးသိမျးသှားမှာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ အာဂငျြတိုငျးသားကို မနျယူနိုကျတကျနဲ့ စပါးအသငျးတို့က ပဈမှတျထားနတောပါ။
နညျးပွဂြီအနျပါအိုလိုကို လောလောလတျလတျထုတျပယျထားခဲ့တဲ့ အစေီမီလနျအသငျးဟာ နညျးပွသဈအဖွဈ ဖီအိုရငျတီးနားနဲ့ အငျတာမီလနျနညျးပွဟောငျး စတီဖာနိုပီအိုလီကို ခနျ့အပျလိုကျကွောငျး တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။
စပိနျထိပျသီးကလပျ ရီးယဲလျမကျဒရဈအသငျးဟာ လာမယျ့နှအေပွောငျးအရှမှေ့ာ ပီအကျဈဂြီတိုကျစဈကွယျပှငျ့ အမျဘာပကေို ချေါယူမယျ့အစား လီဗာပူးလျတိုကျစဈကစားသမား မိုဆာလာကို ပေါငျသနျး (၁၅၀) ပေးခကြော ချေါယူသှားဖှယျရှိနတေယျလို့ သတငျးတှကေ ဖျောပွပါတယျ။
ဘာစီလိုနာကြယ်ပွင့်လီယွန်နယ်မက်ဆီကတော့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ အသင်းဖော်ဟောင်း နေမာတယောက် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့သွားမှာကို စိုးရိမ်နေပါတယ်။
စီးရီးအေလက်ရှိချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ်အသင်းဟာ ဒီနှစ်ရာသီမှာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြသနေတဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမား ကွာဒရာဒိုကို စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုကာ အသင်းမှာပဲ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
နာပိုလီအသင်းဟာ ဘာစီလိုနာအပါအဝင် ဉရောပထိပ်သီးကလပ်အသင်းအများစု ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ နော်ဝေတိုက်စစ်မှူးလေး ဟာလန်းကို အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာပါတယ်။ ဟာလန်းဟာ ဒီနှစ်ရာသီမှာ ရက်ဘူးလ်ဆယ်ဘာ့ဂ်ျအသင်းအတွက် (၁၁)ပွဲ ကစားပေးပြီးချိန်မှာ သွင်းဂိုး (၁၈)ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးထားနိုင်သူပါ။
လူငယ်ကြယ်ပွင့်လေး ဘရာဟင်ဒီယက်ဇ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နွေအပြောင်းအရွှေ့မှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက အငှားချမယ့်အစီအစဉ်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ဘာနေဗြူးမှာသာ ဆက်ရှိဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကာ ပုံမှန်နေရာအတွက် အခွင့်အရေး စောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မက်ဆီက သူ့အနေနဲ့ အခွန်ကိစ္စတွေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်ခန့် (၂၀၁၄)ခုနှစ်လောက်က ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ နီးစပ်ခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘလွန်ဒီအောဆု (၅)ကြိမ်ရ ကစားသမားဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ နူးကမ့်မှာပဲ ဆက်ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်အသင်းဟာ လာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာလည်း တိုက်စစ်ကစားသမား ဒီဘားလားကို ရောင်းထုတ်သွားဖို့ မရှိဘဲ တူရင်မြေမှာပဲ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အာဂျင်တိုင်းသားကို မန်ယူနိုက်တက်နဲ့ စပါးအသင်းတို့က ပစ်မှတ်ထားနေတာပါ။
နည်းပြဂျီအန်ပါအိုလိုကို လောလောလတ်လတ်ထုတ်ပယ်ထားခဲ့တဲ့ အေစီမီလန်အသင်းဟာ နည်းပြသစ်အဖြစ် ဖီအိုရင်တီးနားနဲ့ အင်တာမီလန်နည်းပြဟောင်း စတီဖာနိုပီအိုလီကို ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
စပိန်ထိပ်သီးကလပ် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ လာမယ့်နွေအပြောင်းအရွှေ့မှာ ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်ကြယ်ပွင့် အမ်ဘာပေကို ခေါ်ယူမယ့်အစား လီဗာပူးလ်တိုက်စစ်ကစားသမား မိုဆာလာကို ပေါင်သန်း (၁၅၀) ပေးချေကာ ခေါ်ယူသွားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။